Tuubbooyinka 'Endotracheal Tubes' Preformed (Preformed Use Use)
• Ka samaysan PVC-darajo caafimaad oo aan sun lahayn, daahfuran, hufan oo siman.
• Khad shucaac leh oo loo maro dhererka muuqaalka raajada.
• Iyada oo leh cabbirka cadaadiska sarreeya oo leh cadaadis hooseeya. Cabbirka mugga sare leh ayaa si togan u xiraya darbiga tracheal-ka.
Tuubbooyinka 'Endotracheal Tubes' (Preformed Use Us)
• Khad shucaac leh oo raadiye ah iyada oo loo marayo dhererka muuqaalka raajada.
Maaskarada wajiga loo isticmaalo caafimaadka
CE la caddeeyey, liiska cad ee Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Soo-Dejinta iyo Dhoofinta Daawooyinka iyo Alaabada Caafimaadka, Diiwaangelinta Gudaha.